BA-SHAR DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Ba-Shar Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Basset Hound / Shiinaha Shar-Pei eeyo isku dhafan oo isku dhafan
'Kani waa isku darka Bassett / Shar-Pei, Jed. Wuxuu qiyaastii yahay 3 sano jir iyo 45 rodol. Jed waa eey aad u jecel oo mararka qaarkood madax adag. Isagu waa nin caqli badan oo si fiican ugu wanaagsan fasalada tababarka. Waxaan ka soo badbaadinay hoy 1 sano ka hor. Wuxuu jecel yahay inuu socod soco oo uu ku ciyaaro alaabtiisa uu ku ciyaaro. Wuxuu si fiican ula shaqeeyaa eyga kale, Lucas ( Daanyeer Weyn ).
Ba-Shar maahan eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Basset Hound iyo Shar-pei . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
Naadiga Isku-dhafka Canine ee Mareykanka = Ba-Shar
Naadiga Naqshadeeyaha Eeyaha Kaynta = Ba-Shar
Ey yar oo madow oo Ba-Shar ah oo 6 wiig jir ah (Basset Hound / Chinese Shar-Pei mix mix dog)
Ba-Shar eey yaryar oo 6 toddobaad jirsaday (Basset Hound / Shiinaha Shar-Pei eeyaha isku dhafka ah)
Ba-Shar eey yar oo 6 toddobaad jir ah (Basset Hound / Chinese Shar-Pei ey isku jira)
timo dhaadheer chihuahua iyo yorkie
Isku dhaji Basset / Shar-Pei (Ba-Shar) da'da 3 sano
'Bella the Basset Hound / Shar-Pei mix (Ba-Shar) markay tahay 2 sano jir - tolliimadu waxay ka timid qalliinkeedii indhaha, oo si wanaagsan u dhacay!'
'Buddy the Basset Hound / Shar-Pei mix (Ba-Shar) markuu 7 sano jiro-wuxuu jecel yahay inuu cuno shinni!'
'Laba milkiile oo leh afar Shar-Pei / Bassets: Jamey (aadanaha), Angus (5), Abby (5), Bella (2), Buddy (7), iyo Tom (qof kale!). Waxaad arki kartaa uun carrabka buluuga ah ee Angus. Si aad u qaadatid sawirkan waxay la mid ahayd xoojinta bisadaha — qof walbaa wuxuu doonayey inuu jiho walba u eego hal mar! '
Arthur the Basset / Shar-Pei mix (Walrus dog) da'da 1 sano jir— 'La kulan Arthur walruskeena (Shar Pei / Basset). Wuxuu jecel yahay inuu xirto xariga qaanso oo uu garaaco baarkinka eeyga. Fiicnaan laheyd haddii isaga iyo Bella ay wada socon karaan taariikh :) '
'Arthur iyo ku darkeena cusub Annie the Walrus eey!'
Arthur the Basset / Shar-Pei mix (Walrus dog) da'da 1 sano
Arthur the Basset / Shar-Pei mix (Walrus dog) oo ah eey ku agdhow panda orso toy ah oo cufan.
Angus the Basset / Shar-Pei mix (Ba-Shar) markay jiraan 14 bilood jir— 'Qof walba wuxuu si joogta ah ii joojinayaa inaan weydiiyo waxa uu yahay isagu ma ahan oo kaliya show-joojiye laakiin waa qof caqli badan.'
Tani waa Abby, mataanaha Angus. Milkiilaheeda ayaa leh, 'Iyadu waa, siduu isagu yahay, sidoo kale waa isku-darka Shar-Pei / Basset. Eeyahaani waa kuwo caqli badan, aad u jecel, isla markaana leh dareen kaftan badan. Waxay noqon karaan kuwo madax adag mararka qaarkood, sida markaad iskudayeyso inaad ka joojiso inay ceyrsadaan bakayle! Waxaan jeclaan lahaa in noocaa laga dhigo 'rasmi' - waa saaxiibo cajaa'ib leh, oo baaxad weyn, oo aan aad u yareyn, oo aan weyneyn. Baaxadda waa 31-40 rodol. Abby waxay u maleyneysaa inay tahay sheybaar, waxayna u dhaqmeysaa sida mid uun!
Isku-darka Angus the Basset / Shar-Pei (Ba-Shar) markuu jiro 14 bilood
Angus the Basset / Shar-Pei mix (Ba-Shar) eey yar oo jira 8 toddobaad
dane weyn iyo isku dhexjir ah
'Angus iyo Abby (labada Ba-Shars) waxay wada joogeen booqasho usbuuc dhammaad ah. Waxaan ka qaadnay sawir labadooda ah, walaal iyo gabar walaasheed dhammaantood weynaadeen! Waxaan rajeynaynaa inaad ku raaxeysato sida wanaagsan ee ay u kobcayaan-hadda waxay jiraan 2 1/2 sano, oo ay ka buuxaan madadaalo iyo tamar! (Angus wuxuu ku yaal bidix, Abby wuxuu ku yaal midigta.) '
Max, oo ah iskudhaf Shiine ah oo Shar-Pei ah iyo Basset Hound (Ba-Shar) oo ah eey yar oo leh toy toy
minichchinauzer shih tzu mix
Max, iskudhaf ah Shar-Pei Shiine ah iyo Basset Hound (Ba-Shar) oo ah eey yar
Mr Darcy the Shar-Pei x Basset Hound (Ba-Shar) eey yar oo jira 9 toddobaad jir— Hooyadiis waa seddexleey Basset Hound aabihiisna waa lilac Shar-Pei. Waqtigan xaadirka ah wuxuu leeyahay lugaha gaagaaban iyo garbaha ballaaran sida Basset. In yar buu ku jiraa jidhka, laakiin kama badna. Wuxuu leeyahay weji Shar-Pei aad u caan ah oo leh indho, xuub iyo dhago dhammaantoodna lagu yaqaan Shar-Pei. Wuxuu u fadhiyaa inuu wax cuno (aad buu u egyahay Basset Hound!) Laakiin si dhakhso leh ayaa loo qoraa
Princess the Ba-Shar eey (Basset Hound / Shar-Pei hybrid) oo qiyaastii 13 toddobaad jir ah— Waxay jeceshahay inay ku dhex quusto cawradeeda fiiqan ee wax kasta oo ay qabsan karto. Tan waxaa ku jira anqawyada qof walba oo soo dhowaada. '
Princess the Ba-Shar eey (Basset Hound / Shar-Pei breed breed) oo qiyaastii 13 toddobaad jir ah oo muujinaysa carrabkeeda madow ee madow
Bailey the Ba-Shar (Basset Hound / Shar-Pei breed breed) eey yar oo ah 12 toddobaad jir ah— 'Mar kasta oo aan aadno jardiinada eeyga ugu yaraan 3 qof ayaa i weydiiya nooca ey eey tahay. Iyadu waa kalgacal, xiiso badan, oo waxay jeceshahay inay ceyrsato eeyaha eryanaya kubbadaha teniska. Anigu kuma qancin karo inay cayrsato kubbadeeda tennis-ka laakiin waxay jeceshahay cayrsashada eeyaha kale. Muddo ayey qaadatay laakiin ugu dambayntii way ku soo korodhay jirkeeda iyo in yar oo madaxeeda ah. '
'Bailey the Ba-Shar waxay weeraraysaa awrkeeda, oo ay markii dambe la legdamaysay muddo aad u dheer, waxay kala soo baxday cunaheeda. Markii aan u kaxaystay PetSmart si ay u soo saarto caruusad waxay soo qaadatay tooy baaxaddeeda leeg oo hadda waxaan kaliya ku beddelaynaa mid cusub oo ay jeceshahay. '
'Bailey the Ba-shar hybrid oo 2 jir ah, culeyskiisuna yahay 35 rodol - waxay umuuqataa inay xajmigaas sii joogi doonto.'
Ba-Shar Sawirada 1
Cocker dachshund qas spaniel muqisho for sale
sawirro eeyo yaryar oo xoog sheegta
adhijirka Australiya ee adag collie mix
Jack russell terrier midabo madow & caddaan ah